Wonke umuntu uyazi ukuthi owesifazane ngesikhathi sokukhulelwa kufanele udle kahle. Ekudleni umama okhulelwe kufanele ahlanganiswe kakhulu wusizo amavithamini wakhe futhi izakhi mkhondo ingane ephile saka. odokotela bavame belulekwa ukudla ulwandle iklabishi, oqukethe semali izakhi ezibalulekile ukukhula nokuthuthuka umbungu. Ngesikhathi esifanayo it has nomthelela omuhle inhliziyo namathumbu yowesifazane. Yini enye izinzuzo zasolwandle ngesikhathi sokukhulelwa? Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka kelp uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Laminaria - kuyini?
Seaweed - kuyinto ulwelwe elingelakwaJuda ekilasini ensundu. Esikhathini ukudla washisa yakhe isikhathi eside, futhi namuhla useyinto ethandwa kakhulu. Kelp ikhula olwandle ezahlukene, futhi ukubonakala kwawo sifana tape eside. 90% alga liqukethe amanzi, futhi ngaphambi kokuba uya sokuphikisa, womile.
Izithako izimila zasolwandle abaningi babheka esiyingqayizivele. Ubunjwe amaprotheni, ama-fiber, sodium, insimbi, i-iodine ayibe, zinc, amaminerali, ama-carbohydrate, polysaccharides, magnesium, manganese, isibabule, i-phosphorus, amavithamini A, C, E, D, B1, B2, B12 nezinye ewusizo Irreplaceable izingxenye. Laminaria ngesikhathi sokukhulelwa kuyasiza kakhulu, kusukela izakhiwo zalo ziyadingeka njengoba umama esizayo futhi ingane.
Yiziphi izinzuzo izimila zasolwandle?
umama okhulelwe kufanele zithole zonke izakhamzimba ezidingekayo, okuyinto kakhulu eziqukethwe kelp. Kodwa njengoba ingasetshenziswa lungelona olwawo wonke umuntu, nawu umbuzo: kungenzeka ukudla ulwandle iklabishi ngesikhathi sokukhulelwa? Odokotela ngisho ngincoma ke, njengoba iqukethe i-folic acid iodine ukugwema kwesisu, ngobungako edingekayo.
It kwandisa isidingo samanzi emzimbeni ngo-senyanga yesibili zensimbi, okuyinto ezuzisa ukuthuthukiswa kwe-fetus ukuvimbela okuvela kuyo anaemia e umama okhulelwe. Iqukethe kelp ne-calcium, umzimba udinga esikhathini amasonto 28. It kuqinisa uhlelo endocrine bone, kanye kubalulekile izinso fetus. Seaweed futhi abacebile magnesium, i-sodium, potassium, phosphorus.
Ngo kelp uqukethe amavithamini B, kuqinisa isimiso sezinzwa ingane. Seaweed ekukhulelweni ezibalulekile kanye neqiniso abaqukethwe ascorbic acid, kwandisa amasosha omzimba umama okhulelwe kanye kunomphumela ezuzisayo phezu ukuthuthukiswa umzanyana kanye amaqanda fetus. Inzuzo enkulu vitamin C ine trimesters wokuqala nowesithathu. Kusiza ukuthuthukisa ukungaboni Vitamin A. wengane Futhi, kelp kusiza ukuthuthukisa ukugaya abesifazane abakhulelwe, ekuvimbeleni ukuqunjelwa kanye ekuqedeni ubuthi namathumbu. Ngekusetjentiswa njalo ingxenye yomzimba wakhe zihlobene cholesterol okweqile kanye radionuclides, kanye kwehlisa blood pressure kanye nokusebenza okuthuthukisiwe.
Izimila zasolwandle njengoba umkhiqizo wezokudla
Ukusetshenziswa zasolwandle ekukhulelweni futhi itholakala lokuthi ukuthi kelp ingasetshenziswa njengendlela umkhiqizo wezokudla, ukugwema ngokweqile kwesisindo, okuyinto sici yokuthathu yesithathu. It is ukuthi isisindo esengeziwe akuyona indlela engcono kakhulu kuthinte Yiqiniso yokukhulelwa, kanye naye umntwana ongakazalwa ezaziwayo. Ngakho-ke, izimila zasolwandle kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokukhulelwa. Namanje ngaphambi ukusetshenziswa kwalo kuyadingeka ukuze uxhumane wezifo zabesifazane yakho, ngakho wayengakwazi bazuze kuphela.
Ingozi izimila zasolwandle
Akukona nje kuphela ukuthi izinzuzo zasolwandle ngesikhathi sokukhulelwa. Izimo futhi akhona. Into ebaluleke kakhulu ubhekwa ukusabela iguliswa umama okhulelwe kwimikhiqizo eziqukethe iodine. Futhi ukusetshenziswa Laminaria engathandeki ezibangela ezihlukahlukene ipheshana wokugaya ukudla, izifo ngomgudu womchamo abese nezinso.
Indlela yokusebenzisa kelp?
Uma udokotela ukuba khona ngokuxoxisana owesifazane okhulelwe wamvumela ukuba afake ekudleni kwakho laminaria, khona-ke kumelwe azi indlela ukukhetha umkhiqizo ewusizo. Wathengisa avame ngesimo ukudla ngomumo-kuya-sidle okusemathinini.
Lapho uthenga iklabishi eqandisiwe kufanele incibilikiswa kanye ngokuphelele engahashazanga ngaphambi kokusetshenziswa. Dry ulwandle Kale kudingeka cwilisa emanzini futhi kuphela ke edliwayo. Abesifazane abakhulelwe kuhle kakhulu ukuba uwuthenge iklabishi eqandisiwe futhi uzilungiselele nalo ezihlukahlukene izitsha kanye ukudla okusemathinini ngokuvamile aqukethe a E220 uyakulondoloza, okuba nomthelela omubi umsebenzi izinso. Ukuthi kwakungekho elinobuthi, kufanele ukuthenga umkhiqizo ne ukuphila okuvamile eshalofini.
Ungakhathazeki ukuthi ukufakwa ekudleni zasolwandle kakhulu ukuthuthukisa izinga iodine emzimbeni futhi zilimaze umntwana esiswini. Amathuba lokhu lincane kakhulu, futhi lokhu kungenzeka kuphela uma, uma njalo udle laminaria eyodwa kuphela. Ukusebenzisa lo mkhiqizo ewusizo kakhulu ezihlukahlukene izidakamizwa zamakhemikhali Vitamin izakhiwo.
I izakhiwo eziyingqayizivele kelp basikisela ukuthi izimila zasolwandle ngesikhathi sokukhulelwa kuyasiza kakhulu. Equkethwe kuwo omningi izakhi kungaletha inzuzo enkulu kokubili umama okhulelwe kanye nengane. Kodwa into - kangakanani athobele ngesilinganiso nangokwesaba azisetshenziswa kulo mkhiqizo. Yidla iklabishi kufanele ibe isamba okunjalo lapho ogunyazwe udokotela.